Isikhokelo sakho sokwenza iShedyuli ethembekileyo yokuPosa kuYouTube ukuze unyuse ukuJongwa-YTpals
Isikhokelo sakho sokwenza iShedyuli ethembekileyo yokuPosa kuYouTube ukuze unyuse ukuJonga
Kukho amanqaku amaninzi kunye neeblogi ezicebisa abadali bomxholo weYouTube ukuba bathumele iividiyo rhoqo ngokunamathela kwishedyuli yokuthumela. Nangona kunjalo, akukho lwazi luninzi malunga nendlela umenzi womxholo anokwenza ngayo ishedyuli yokuthumela impumelelo. Ukuba umtsha ngokwentelekiso kumboniso kaYouTube, qhubeka ufunda. Kule posi, siza kwabelana nawe ngazo zonke iingcebiso eziphezulu onokuzisebenzisa kucwangciso lomxholo weYouTube onika iziphumo eziqinileyo.
Sebenzisa into kaYouTube yokuthumela rhoqo
Ukuba awufuni ukwenza ishedyuli yokuthumela eneenkcukacha, ungasebenzisa inqaku le-YouTube lokuthumela rhoqo elinikezelwa liqonga kubadali bomxholo. Unokwenza useto usebenzisa eli nqaku xa ufaka ividiyo ethile eza kupapashwa. Njengoko ulayisha ividiyo yakho, kuya kufuneka ufake iinkcukacha ezahlukeneyo ukugqiba ukuseta ividiyo ukuze ipapashwe. Kulapho uya kudibana nethebhu ethi 'Ukubonakala', eya kukuvumela ukuba ucwangcise ixesha lokupapasha ividiyo yakho.
Yenza ishedyuli yokuthumela ehambelana nawe
Uninzi lwabadali bomxholo kuYouTube ngoku bapapasha umxholo yonke imihla ukonyusa iimbono zabo kunye nokubalwa kwababhalisi. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba wonke umntu ekhupha umxholo wemihla ngemihla akuthethi ukuba nawe ufanele. Ngokuqinisekileyo, ukuba uyakwazi ukugcina umgangatho ophezulu ukwenza ukulayisha rhoqo, qhubeka phambili. Nangona kunjalo, ukuba ukhululekile ngakumbi ukupapasha iividiyo ezi-1 okanye ezi-2 ngeveki, yile nto kufuneka unamathele kuyo. Khumbula, ungaze uncame umgangatho ngenxa yobuninzi - inokukunika iziphumo kwixesha elifutshane, kodwa uya kuphulukana nababukeli ekuhambeni kwexesha.
Yenza uninzi lweSitudiyo sikaYouTube
Isitudiyo sikaYouTube linqaku elivumela abaqulunqi bomxholo ukuba balawule umxholo wabo ngokutyibilikayo nangokungenamthungo. Ngaphandle kokubonelela ngetoni yeempawu zolawulo lomxholo, iSitudiyo sikaYouTube sikwanika abadali bomxholo ulwazi malunga nokusebenza kweevidiyo zabo. Olu lwazi lubonelela ngeenkcukacha ezininzi ezibalulekileyo, kubandakanya namaxesha apho iividiyo zakho zijongwa kakhulu. Ukulandelela olu lwazi kubalulekile, njengoko kuya kukunika izimvo ezintle malunga nawona maxesha afanelekileyo okuthumela kuYouTube ngo-2022.
Injongo yokungaguquguquki ngaphezu kwayo yonke enye into
Ukuba uluhlobo lukaYouTuber onokupapasha ividiyo enye kuphela ngeveki, ungakhathazeki malunga nenani leevidiyo ezipapashiweyo onokuzinikezela. Endaweni yoko, sicebisa ukuba sigxile ekuvumelaneni, okuya kuvumela ababukeli bakho ukuba bagcine izinto ezilindelekileyo kuwe. Umzekelo, ukuba uthumela ividiyo rhoqo ngoMvulo, kuya kufuneka uqinisekise ukuba nokuba kwenzeka ntoni, akusayi kubakho uMvulo odlulayo ngaphandle kokulayisha ividiyo. Oku kuya kukunceda ukuba uzibekele usukelo olufikelelekayo – iinjongo onokuthi uzifezekise kwaye uzilinganise.
Gcina ingcinga ngeeShorts zikaYouTube kunye nakuYouTube Live ngokunjalo
Kanye, iYouTube ivumele kuphela abadali bomxholo ukuba bathumele uhlobo olunye lwevidiyo, kodwa ezo ntsuku zihambile. Kule mihla, iYouTube ibonelela ngoluhlu olubanzi lweentlobo zomxholo, kubandakanya iiShorts kunye neLive. IiShorts zikaYouTube ziye zavela njengokhuphisana kwi-TikTok ephumelele kakhulu kunye ne-Instagram Reels, kwaye ivumela abaqulunqi bomxholo ukuba batshintshe imixholo yabo. IYouTube Live ikwayindlela entle yokuba abadali bomxholo basondele kubalandeli babo. Ke, xa usenza ishedyuli yokuthumela, yenza iishedyuli ezahlukeneyo zeeShorts zikaYouTube kunye neYouTube Live.
Ukuba uyafuna ukujonga kwi-YouTube ukwenza isitishi sakho siqalise ukuphaphazela, kutheni ungacingi ukwenza uninzi lwenkonzo efana neeYTpals. Ngaphandle kweembono zasimahla kunye nezinto ezithandwayo, iiYTpals zikwavumela abaqulunqi bomxholo ukuba bathenge ababhalisile kwiYouTube.
Isikhokelo sakho sokwenza iShedyuli ethembekileyo yokuPosa kuYouTube ukuze unyuse ukuJonga ngababhali beYTpals, 24 January 2022
Kukho amanqaku amaninzi kunye neeblogi ezicebisa abadali bomxholo weYouTube ukuba bathumele iividiyo rhoqo ngokunamathela kwishedyuli yokuthumela. Nangona kunjalo, akukho lwazi lungako malunga nokuba umenzi womxholo angenza njani ukuthumela…